Webhusaiti Yakavanzika Policy »Hodges University Admissions
Ndatenda nekushanyira Hodges 'webhusaiti. Hodges University inotevera mirau nemirau sezvainodiwa neFlorida Statute, US Federal mitemo, uye General Data Dziviriro Regulation (GDPR). Hodges University inogona kuwanikwa pamhepo pawww.hodges.edu. Isu tine zvakare kambasi nzvimbo muFort Myers: 4501 Colonial Blvd., Fort Myers, FL 33966.
Isu tinounganidza yekuzvidira-yakapihwa dhata nezve yedu webhusaiti vashanyi kuburikidza nekugadzira account, kunyorera, uye mafomu ekutaurirana akaendeswa kuburikidza ino saiti.
Uyezve, isu tinoshandisa webhusaiti yekutevera dhata kuti tipe yakanakisa mushandisi ruzivo. Isu tinoshandisawo makuki pane webhusaiti yedu kutungamira uye kugadzirisa ruzivo zvichibva panzira yako yekupinda kune ino saiti. Saiti iyi zvakare inounganidza traffic uye yevashanyi ruzivo senge internet domain nekero yeinternet yekombuta iwe yauri kushandisa nekushandisa yakajairwa webhu analytics maturusi uye ekuteedzera maturusi. Ruzivo rwunounganidzwa nderwekushandisa kwemukati chete kutsigira kunyoreswa kwevadzidzi, kupindura kumibvunzo yevashanyi vewebhusaiti, uye analytics yewebhusaiti.
Zvinongedzo zvekunze zveInternet zviwanikwa, kusanganisira mawebhusaiti, ari kupihwa kuitira ruzivo ruzivo chete; hazviiti kubvumidzwa kana kupihwa mvumo neHodges University yechero zvigadzirwa, masevhisi, kana maonero ekambani, sangano, kana munhu. Hodges Yunivhesiti haina mutoro wekutendeseka, huchokwadi, kana zvirimo zveinzvimbo yekunze kana yeiyo yeanotevera maratidziro. Bata iyo yekunze saiti mhinduro dzemibvunzo maererano nezviri mukati.
Muzhinji, webhusaiti yeHodges inoitirwa kuti ishandiswe nevakuru, kunze kwekunge yakanyatso kunyorerwa vana. Hodges haatore neruzivo ruzivo kubva kuvana vari pasi pemakore gumi nematatu. Kana tikaziva kuti takaunganidza Ruzivo rweMunhu rwemwana ari pasi pemakore gumi nematatu rwusina kupihwa kwatiri nekuzvidira, tinobvisa iyo data kubva kumasystem edu.
Kana iwe uri munhu mukati meEU uye ukabatana naHodges mune mamiriro echiZiviso ichi, iyo GDPR inopa anotevera kodzero. Kuti ushandise chero rwekodzero idzi, ndapota nyorera Data Protection Officer wedu kuGloria Wrenn, jobs@hodges.edu..